Burmese taste - Iora: ၀က်သားနဲ့ သရက်သီးသနပ်ချက်၊ ပဲသီးထောင်း၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ကြက်ခြေထောက်ဟင်းချုို
Posted by Iora at 1:57 AM
Baby taster June 29, 2011 at 2:25 AM
ဆိတ်သားနဲ့ အမဲသားကိုတော့ အဲ့လို ခဏ ခဏချက်တယ်
ပဲသီးထောင်း မစားဖူးဘူးသိလာ လုပ်စားရမယ်
ကိုညီလာရင် မကျန်မှာစိုးလို့လေ ;)
Iora June 29, 2011 at 2:29 AM
ဟုတ်သားဘဲ။ ပဲကို ကြက်သားနဲ့ ဘဲချက်ဖြစ်တယ်။ ချက်ကျွေးအုန်းမှ။ ကုိုယ်ကပဲစားရင် ဗိုက်အောင့်တယ်။
I love all the dishes Iora. By the way, if you have time, can you post about အုန်းနုို့ သာကူပြင် as I am dying to eat that, even on the screen.
Nyi Linn Thit June 29, 2011 at 5:31 AM
ကန်းစွန်းရွက်ကြော်နဲ့ ပဲသီးထောင်းထဲက ငရုတ်သီးတွေက မျက်စပစ်နေလို့ သွားရည်ကျမယ် ကြံခါရှိသေး မဘေဘီက အရင်ဦးသွားပြန်ပြီ၊း) ဒါနဲ့ ဝက်သားကိုပဲ ဝမ်းနည်းစွာ စားသွားပါတယ်ဗျာ...။း(
Iora June 29, 2011 at 12:08 PM
ထိုင်းမှာလွယ်လွယ်ရတဲ့သာကူရှိနေတာတောင် ဒီသာကူကုိုသိပ်စားချင်တယ်ဆိုတော့ ဂုဏ်ယူရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ပြန်စဉ်းစားပြီး တင်ပေးပါ့မယ်နော် အချိန်ရတာနဲ့ ။း)
နောက်ကျရင် သိတယ်မှုတ်လား။ ပဲသီးထောင်း ဆက်ထောင်းစားဖြစ်လို့ ထပ်တင်ပေးပါ ဦးမယ်။ ဦးအောင်လာပေတော့နော်။
သဉ္ဇာ - Thinzar June 29, 2011 at 11:24 PM
အဲက ကန်စွန်းရွက်တွေက အသားဖြူတယ်နော် :D
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) June 29, 2011 at 11:38 PM
အော် အရောက်နောက်ကျတော့ ဟင်းတွေလဲ ကိုညီလင်းသစ်နဲ့ မဘေဘီတို့စားလို့ ကုန်ပြီထင်ရဲ့ ...
ကန်ဇွန်းဖြူက မုန်ညှင်းနဲ့ ဆင်တယ်နော် ရုတ်တရက်ဆို မုန်ညှုင်းထင်နေတာ
ပဲသီးထောင်းလည်း စားချင်တယ် ကြက်ခြေထောက်တော့ ကြိုက်ပြီးသားမို့ ထူးထူးထွေထွေ မလိုတော့ဘူး
Iora June 30, 2011 at 12:53 AM
ဖြူတာကဈေးပိုကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ထူးပြီးတော့မကောင်းလှပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဈေးသက်သာပြီး နဲနဲမဲတဲ့ကစွန်းကို ဘဲခုရက်ပိုင်းဈေးသက်သာနေတော့ ဆက်တိုက်အားပေးနေတယ်လေ။း)
ဘယ်လျှောက်သွားနေလဲ။ နောက်ကျပြီပေါ့။ ချောကတော့လေ..ဘာချက်ချက်စားချင်တယ်ချည့်ပြောတာဘဲ။ သိပ်လိမ္မာတယ်။း)
ကောင်းမွန်ဝင်း June 30, 2011 at 9:02 PM
အဲဒီပဲသီးမျိုးလည်း ရဘို့ခက်တယ်။ ရထားနဲ့ ၄၅မိနစ်လောက် သွားရတဲ့ နေရာမှာတော့ ရှိပါရဲ့၊
အိုင်အိုရာပြောသလို ချက်ချင်းစားပါ့မယ်။ နွမ်းတဲ့ အနံ့တော့ မကြိုက်ဘူးလေ။
Iora June 30, 2011 at 9:23 PM
ကုိုယ်လည်း မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီပဲတောင့်ရှည် ကိုသိပ်ကြိုက်လှတာမဟုတ်ဘူး။ သုတ်တာကလွဲရင်။ ဒီရောက်တော့ မြန်မာ့အသီးအနှံအကုန်မရှိတော့ ရှိတဲ့ဟာကို အလွမ်းပြေစားဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲလိုပြတ်နေလို့ လားမသိဘူး။ ပဲသီးထောင်းကိုလည်း လျှာတွေ့ နေပြီးဆက်တိုက်ထောင်းစားဖြစ်နေတာ။
Iora June 30, 2011 at 9:29 PM
စူးနွယ်လေး July 1, 2011 at 6:33 AM
အဲဒါပဲတောင့်ရှည်ကိုအိမ်မှာလည်းထောင်းစားတယ်။ အရည်စပ်စပ်လေးလည်းချက်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့သူ့ကိုဘယ်လိုချက်ချက်မကြိုက်ဘူး။ အခုတော့ဗမာဟင်းဆို ကြိုက်နေတာပဲ:) သရက်သီးသနပ်နဲ့ဝက်သားလည်းချက်စားဦးမယ်။ အမေလည်းချက်တယ်။ ဟင်းရည်ထဲကအရိုးကိုက်ချင်လိုက်တာနော်
Iora July 1, 2011 at 10:22 AM
ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ် စူးနွယ်လေးရေ။ ဗမာဟင်းဆိုကြိုက်နေတာလေ။
ကုိုက်ကုိုက်..ကုိုယ့်မှာကိုက်မဲ့အဖေါ်မရှိလို့ အဖေါ်မျှော်နေတာ။ ကုိုယ့်ရဲ့ သူကဘာရုိုးမှမကုိုက်ဘူး။ ကုိုယ်တော့ ဒီမှာတယောက်ထဲ အရုိုးကိုက်ရတော့ မမနဲ့ တူမကို သိပ်လွမ်းမိတယ်။ သူတို့ ကချဉ်ဆီကြိုက်တော့ တခါတလေ ငရုတ်ကျည်ပွေ့ နဲ့ တောင်ထုစားတာ။ ကုိုယ်တို့ တွေ အရုိုးဟင်းချက်တဲ့နေ့ ဆို ထမင်းဝိုင်းကမပြီးတော့ဘူး။း)